Isaya 17 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mutongo pamusoro peDhamasiko (1-11)
Marudzi achatukwa naJehovha (12-14)
17 Mutongo pamusoro peDhamasiko:+ “Inzwai! Dhamasiko ichange isisiri guta,Uye ichava murwi wematombo.+ 2 Maguta eAroeri+ achasiyiwa asina munhu;Achava nzvimbo dzekuti mapoka ezvipfuwo ararePasina anoavhundutsa. 3 Maguta akakomberedzwa nemasvingo achanyangarika muEfremu,+Neumambo muDhamasiko;+Uye vaya vachasara pavaSiriyaVachange vakafanana nekukudzwa kwevaIsraeri,”* ndizvo zvinotaurwa naJehovha wemauto. 4 “Zuva iroro kukudzwa kwaJakobho kuchadzikira,Uye muviri wake une utano* uchaonda. 5 Zvichange zvakaita sepaya panochekwa zviyo* mumunda nemukohwiUye ruoko rwake parunocheka hura* dzezviyo,Sezvinoitwa nemunhu anounganidza hura dzezviyo dzakasaririra muBani reRefaimu.+ 6 Pachangosara zvinonhongwa nevanounganidza zvinosaririra,Sepaya panozunzwa muorivhi: Maorivhi maviri kana matatu akaibva ndiwo chete anosara pabazi repamusorosoro,Mana chete kana mashanu pamapazi awo anobereka,”+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha Mwari waIsraeri. 7 Zuva iroro munhu achatarisa kumusoro kuMuiti wake, uye maziso ake acharamba akatarisa Mutsvene waIsraeri. 8 Haazotarisi atari,+ iro basa remaoko ake;+ uye haazorambi akatarisa zvakagadzirwa neminwe yake, angava mapango anoyera* kana zvigadziko zvekupisira rusenzi. 9 Zuva iroro maguta ake ekuhwanda achaita senzvimbo yemusango yakasiyiwa,+Sebazi rakasiyiwa pamberi pevaIsraeri;Pachangosara nzvimbo isina chinhu. 10 Nekuti wakanganwa Mwari+ weruponeso rwako;Hauna kuyeuka Dombo,+ iyo nhare yako. Ndokusaka uchidyara minda yemiti yakanaka*Uye uchidyaramo nhungirwa yeuya wausingazivi.* 11 Masikati unonyatsokomberedza miti yako neruzhowa,*Mangwanani unoita kuti mbeu yako imere,Asi goho richanyangarika pazuva rechirwere nemarwadzo asingarapiki.+ 12 Teererai! Kune nyonganyonga yevanhu vazhinji,Vasina kugadzikana semakungwa! Kune zhowezhowe remarudzi,Ayo ane ruzha runotinhira semvura ine simba! 13 Marudzi achaita ruzha runotinhira semvura zhinji. Iye achaatuka uye iwo achatizira kure,Achidzingirirwa sehundi yemumakomo iri kupeperetswa nemhepo,Semasora anobaya ari kutenderedzwa nedutu. 14 Manheru pane kutya kukuru. Mangwanani asati asvika, havasisipo. Uyu ndiwo mugove wevaya vanotitorera zvinhu nechisimbaUye ndizvo zvichawanikwa nevaya vanotipamba.
^ ChiHeb., “kwevanakomana vaIsraeri.”
^ ChiHeb., “mafuta enyama yake.”
^ Kana kuti “inoyevedza.”
^ Kana kuti “yamwari wekune imwe nyika.”